” ဘုရားတွေအား အိမ် အသုံး ဆောင် လုပ်မယ် ဆိုရင်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ” ဘုရားတွေအား အိမ် အသုံး ဆောင် လုပ်မယ် ဆိုရင်”
” ဘုရားတွေအား အိမ် အသုံး ဆောင် လုပ်မယ် ဆိုရင်”
Posted by Sa Yar san on Oct 3, 2014 in Buddhism, Cultures | 11 comments
ပြော တဲ့ ခေါင်းစဉ်အတိုင်း လုပ်မယ် ဆို ခင်ဗျား တို့ လက်ခံမလား? ဘာလဲဗျာ အိမ်နီး ချင်း နိုင်ငံ စိန က ဘုရားရုပ် ထုတွေ ကို အများကြီး ထုတ်လုပ်ပြီး တခြားသော နိုင်ငံတွေကို အိမ် အသုံး ဆောင် အဖြစ် ရောင်းချ တယ် ကိုယ် တိုင်က ကွန် မြူ နစ် ဝါဒကို သုံးနေတဲ့ လူတွေက စက္ကူ ဆိုတဲ့ လူတွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငွေကို ဘဲ ကြည့် ပြီး သူတပါး ရိုသေကိုင်းရှိူင်းတဲ့ ဘာသာ တွေကို ဆော် ကားတာ ကို နိုင်ငံတကာက ကြည့် နေတယ် နောက် အနောက်နိုင် ငံ က ပညာ တတ် ဓါတ်သက် ကျေ သံသေ သမားတွေက လဲ အိမ်မှာ ပန်းခြံမှာ အလှထားဖို့ ဝယ်ကြလေကုန်သတည်း ခင်ဗျား တို့ စဉ်းစားကြည့်ပါဗျ ဘယ်ဘာသာရဲ့ ဘုရား ကို ဧည့်ခန်း တို့ ရေချိုးခန်း နိုက် ကလပ်တွေမှာလူ အသုံး ဆောင် အဖြစ် တွေဘူးလဲ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ ဘုရားဟာ ခေါင်းလဲ တခု ကိုလဲ မပါဘဲ နဲ့ တမျိုး တင်ပလင်ခွေ လျှက် က တပုံ အိမ် အသုံး ဆောင် တွေ အဖြစ်ဝယ် သူသုံးစွဲ ကုန်လေပြီ…။
ကျုပ် အစွန်းရောက်တဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး လူ တွေကိုစဉ်းစားပြီး တယောက်ယာဉ်ကျေးမှူ့ ကို တယောက် အလေးထားနားလည် ပေးရမဲ့ အစား စိနတွေက သူခိုး ဒါးရိုးကမ်းသလို လုပ်စားကုန်ကြတယ်…။
ဒီတော့ ကမ္ဘာ မှာ အကြမ်း ဖက်ဆန့်ကျင် ရေးတွေ လုပ်သလို စိန တွေကို လဲ ယဉ်ကျေးလာအောင် ငွေကြီးဘဲမကြည့် အောင် ဘာသာ တရားနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ရေးရာ ရိုင်းဆိုင်းမှူ့တွေကို ဝိုင်းခဝါ ချဖို့ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့မှာ တာဝန်ရှိကြောင်း မမေ့ ပါနဲ့ ဗျာ…….။
တော်လှန်ရေးအောင် ရမည် အရေးတော် ပုံ စိနများ ကျဆုံးရေး…. ဒို့ အရေး…။
ဒီတရုတ်တွေကတော့ . . . . .
ရှိသေးတယ်… ဟိုးအရင်က အေကွန် ခေတ်စားစ က… သီချင်းတပုဒ်ရဲ့ အမ်တီဗွီဗျာ… ဒေးဗစ်ဂယ်တိုနဲ့ ဆိုထားတာ… အဲမှာလဲ ဘုရားပုံရှေ့မှာ ကောင်မတွေက ဖင်တွေကုန်းပြီး ရိုက်ထားတာ ရှိဖူးတယ်.. အဲကတည်းက အေကွန်လဲ ဒီမှာ နာမည်ကျသွားတာပဲ…
ရှင်​​တော်​ဗုဒ္ဓ ရဲ့ဝါဒီက ​ကြောင်းကျိုးဝါဒပါ
အ​ကြောင်း​တရား​ကောင်း ​အောင်​လုပ်​ရင်​ အကျိုးတရား​ကောင်းပါ၏
အ​ကြောင်းတရားမ​ကောင်း ရင်​ အကျိုးတရားလည်းမ​ကောင်းပါဘူး
သာသနာမပြန့်​ပွားရာအ​ ​ဒေသမှာသာသနာပြန့်​ပွား​ ​အောင်​ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်​​တွေကသာ စွမ်း​ဆောင်​နိုင်​တာပါ
လုပ်​ရပ်​က အင်​မတန်​ စက်​ဆုတ်​ရွံ့ရဘွယ်​ရာ ​ကောင်းလွန်းလှပါတယ်​ သာသနာနဲ့ကြုံ​တွေ့ခိုက်​မှာ အသိတရားရှိဘို့ အတွက်​သူ​တော်​​ကောင်း ​အရိယာပုဂ္ဂိုလ်​​တွေက သာသနာပြန့်​ပွား​အောင်​ ​​ဆောင်​ရွက်​​နေကြတာပါ ယုံမှကြည်​တာပါ မယုံသူ​တွေက မကြည်​ညိုကြပါဘူး
ဘုရားပုံ ရုပ်ထု တွေကို အနေကဇာ မတင်ရသေးသရွေ့ ကိုးကွယ်ရာဘုရား မဖြစ်ဟု သိရပါတယ်။
အသိ ဂျာမန်​တစ်​​ယောက်​ ​ဟောင်​​ကောင်​သွား​တော့ ​ကျောက်​စိမ်းရုပ်​ပွား​တော်​​တွေခဲ့တယ်​.မြန်​မာလက်​ရာပါတဲ့.အစိမ်းတစ်​​သောင်း​ကျော်​​လောက်​တန်​တယ်​တဲ့.​ရှေး​ဟောင်းရုပ်​ပွား​တော်​လို့​ပြောတယ်​။ အဲ့မှာသူက​ပြောတယ်​ မင်းတို့​တွေပိုက်​ဆံရတိုင်းအပြင်​ကိုထုတ်​မ​ရောင်းသင့်​ဘူးတဲ့။ ပြတိုက်​ထဲမှာ ထားသင့်​တယ်​တဲ့။
မ​နေ့က အုံနာရုံးကိုသွား​တော့ သြဇီ ဦး​လေးကြီးက ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်​က ကန်​​ဘောဒီးယားသွားတုန်းကသူရိုက်​လာတဲ့ပုံ​တွေပြတယ်​။ ဘုရားရုပ်​ပွား​တော်​​တွေမှာ ​ခေါင်းမရှိဘူး။ သူကအံ့သြ​နေတာ။ ​
လူ​တော်​​တော်​များများက​နေရင်းထိုင်းရင်းသူများဘာသာတရားကိုသွားရန်​စမ​နေပါဘူး။ ကိုယ့်​ဘာသာကို ကိုယ်​ကရို​သေပြ​နေရင်​ သူတို့လဲအဲ့လို အလိုက်​သင့်​​နေ​ပေးပါတယ်​။ ကိုယ်​လည်း​သူများသွားရန်မစမိ​စေနဲ့​ပေါ့။ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ မူပိုင်​. ရုပ်​ပွား​တော်​မူပိုင်​ဆိုပြီးရှိရင်​​တော့ စိနကိုတရားစွဲ​ပေါ့။
Country | Number of Buddhists
China	| 102 000 000
Top 10 Buddhist Countries, Largest Buddhist Populations
စိနပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အရေအတွက်က မြန်မာပြည်ထက် ၂ဆကျော်များနေတာ.. ဗုဒ္ဓ မူပိုင်လုပ်မယ်ဆို.. သူတို့က.. တရားပြန်စွဲရင်.. နိုင်မှာသေချာ…
အရုပ်ကိုအရုပ် ( မတည်မြဲတဲ့.. ရုပ်ဝတ္တု)တွေလို့သာသဘောထားစေချင်…။
သြဇီ က အိမ်တစ်ချို့ ရှေ့ မြက်ခင်း တို့ ၊ ဖိနပ်ချွတ် တို့တွေမှာ ၊
ဘုရား ရုပ်ထုလေးတွေ ထားကြတာ တွေ့ရတယ် ။
သူတို့က ဘာရယ် မဟုတ် အလှထားကြတာပါ ။
မှန်တာပြောရရင် ၊ အဲဒီ ကိစ္စကို ကျနော်လည်း မကြိုက်ပါဘူး ၊
ဒါပေမယ့် ၊ အရမ်းကြီးတော့လည်း သိပ် မခံစားမိပါဘူး ။
အရုပ် တစ်ခုလို့ဘဲ တွေးလိုက်တာပါဘဲ ။
ကိုယ် အထွဋ်အမြတ်ထားတာကို မသင့်တော်တဲ့ နေရာမှာရောက်နေတာမြင်ရင်
ရှင်းပြပြီး နေရာပြောင်းခိုင်းရင် ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓကို မူပိုင် လုပ်ခွင့် ဆိုတာ က ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ တရားထူး ရ ခဲ့ တရား ဦး ပြ ခဲ့ တဲ့ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးက ဘဲ လုပ်ခွင့်ရှိပါမယ်
အခုတောင် ဓါတ်ပုံလောက မှာပြဿနာတက်နေတယ်။
စကျင်တောင်မှာ မိန်းခလေးတစ်ဦးက ဘုရား ဆင်း တု ကို အချောကိုင်တဲ့ပုံ ကို ဓါတ်ပုံ ကို ပြိုင်ပွဲမှာပထမ ပေးလိုက်လို့ ဆိုပြီး တော့ အော်နေကြတယ်
အဖြူတွေအိမ်မှာ.. ဖိနပ်ချွတ်မရှိတာများသလို.. အိမ်အ၀င်(မြန်မာတွေဖိနပ်ချွတ်)ကလည်း.. သူတို့အတွက်.. နိမ့်ကျတဲ့နေရာမဟုတ်ပေပြန်ဘူး..။
( ကြုံလို့ပြောရရင်.. မြန်မာတွေခမြာ… ခွဲခြားဆက်ဆံတာများ.. ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင်.. ခေါင်းကမြင့်မြတ်တယ်..။ ခြေထောက်က နိမ့်ကျတယ် နဲ့.. အံ့သြစရာ.. )
အဲဒီတော့..မသင့်တော်တဲ့နေရာဆိုတာကို.. ဘယ်လိုမြင်ကြမလည်း.. တော်တော်အရေးကြီးမယ်ထင်မိတယ်..။
အသိတော်တော်များများကတော့.. ဗုဒ္ဓရုပ်ထုကို.. peace သဘောနဲ့.. ထားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်..
လွန်ခဲ့တဲ့.. ၅နှစ်ကျော်က.. LA Times သတင်းဆောင်းပါးမှာဆို.. ဗုဒ္ဓရုပ်ထုတွေ ခရစ်ယန်တွေရဲ့ အိမ်ဧည့်ခန်းတွေ.. အိပ်ခန်းတွေထဲနေရာယူလာကြတာများလို့တောင်.. စိစစ်ဝေဖန်ရေးဖူးတယ်..။
ဒီနေရာမယ်.. ရောမရောက်သူကို.. . ရောမသားတို့(သာ)အနိုင်ကျင့်ကြပါလို့ပဲ.. ပြောချင်…။
ကျမကနားမလည်​ အသိမရှိလို့ အပြစ်​လုပ်​မိရင်​ အ​မေက ​ပြောတယ်​ အပြစ်​ဆိုတာ လုပ်​မိရင်​ ကြီးတာငယ်​တာ မသိတာ မဆိုင်​ဘူး အပြစ်​လုပ်​ရင်​ ခံရမှာလို့အ​မေက​ပြောပြ​လေ့ ရှိတယ်​
မသိလို့ပဲလုပ်​လုပ်​ သိလို့ပဲလုပ်​လုပ်​ အပြစ်​ပြုလုပ်​ရင်​ ​တော့ခံရမှာအမှန်​ပါ